China Bandage imaski Ukwenziwa kunye Factory | Itekhnoloji yoNyango esekwe kubungqina e-Hebei
1. Kukhululekile ukunxiba kwaye kufanelekile kwisihlwele, awubambi mphefumlo wakho, uphefumla kakuhle, kwaye ngokufanelekileyo ukwahlula amasuntswana ebacteria.
2. Inokuthintela ngokufanelekileyo inkungu, umungu, icuba, amasuntswana ebacteria kunye nezinye izinto eziyingozi.
3. Thintela amathontsi othuli, izinto ezingafunekiyo zokucoca umoya, kulula ukuziphatha, zibhityile kwaye kulula ukuzinxiba, kwaye zinokususa igesi yokukhupha umoya ukuze iphefumle umoya omtsha.
4. Imveliso ayenzi mihombiso ilambathayo, iimaski zobuchwephesha ezichasene namathontsi, ubugcisa kunye nokukhuselwa kunokwenza ubomi bube sempilweni.
5.Izixhobo zemveliso ziyanyibilika ilaphu eliphephezelisiweyo, ilaphu elinobuhle elingenalukhuni, ulungelelwaniso oluphezulu, uyilo olumilise i-V, olulungele abantu abaninzi abanobuso obungaphezulu.
Iimaski zokhuselo zonyango zilungele ukukhuselwa kwabasebenzi bezonyango kunye nabasebenzi abanxulumene noko nxamnye nezifo ezosulelayo eziphefumla ngomoya. Luhlobo lokuzivavanya ngokusondeleyo kwezixhobo zokukhusela zonyango ezinomgangatho ophezulu wokukhusela, ngakumbi zilungele ukubonakaliswa kukuhamba komoya ngexesha lokuqonda isifo kunye nemisebenzi yonyango okanye xa kunxitywe zizigulana ezinesifo sokuphefumla zisasazeka ngamathontsi kufutshane, eli nqanaba yemaski inokucoca amasuntswana emoyeni kwaye ivimbe ukungcola okunje ngamathontsi, igazi, ulwelo lomzimba, kunye nencindi. Ukusebenza kokuhluza kweengqokelela zeoyile ezingenamafutha kunokufikelela kuma-95 Ngaphezulu kweepesenti kufikelela kwinqanaba le-N95, esisisixhobo sokukhusela somntu esisetyenziselwa izifo zomoya. Inobuso obulungileyo kunye nobuso bomntu onxibileyo kwaye iyimveliso yokusetyenziswa ngexesha elinye. Iimaski zokhuselo zonyango zinokuthintela uninzi lwezifo ezifana neebhaktheriya kunye neentsholongwane. I-WHO icebisa ukuba abasebenzi bezonyango basebenzise iimaski zokuzikhusela ngokuchasene namasuntswana ukuthintela usulelo lwentsholongwane emoyeni wasesibhedlele.
Umgangatho: I-GB19083-2003 Inqanaba lokucoca: 99%
umgangatho wokhuseleko: 0469-2011 imask yokuhlinzwa Igama lemveliso: Ezilahlwayo imaski yokhuseleko
Okulandelayo: Indlebe imaski imvelaphi inyuselwa khona